No. 2151, Tuesday, June 11, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2151, Tuesday, June 11, 2019
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၉ ရက် (အင်္ဂါ၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၉)
အိန္ဒိယတွင် ရေတွင်းထဲပြုတ်ကျသော ကလေးကို မကယ်နိုင်ဖြစ်ပြီးနောက် ဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပွား
ကျဉ်းမြောင်းသော ရေတွင်းအတွင်း လေးရက်ကြာ ပိတ်မိခဲ့သော အသက် (၂)နှစ်အရွယ် အိန္ဒိယကလေးငယ်ကို ဇွန်လ၁၁ ရက်က သေဆုံးလျက်သား ပြန်လည်ဆယ်ယူခဲ့ရာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ် စေခဲ့သည်။
ကွယ်လွန်သူအမတ်၏မဲဆန္ဒနယ်သို့ အခြားကိုယ်စားလှယ်များ ကွင်းဆင်းပေးရန် စစ်ကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမေတ္တာရပ်ခံ
လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်သေဆုံးပြီး အစားထိုး ပြန် လည်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း မရှိသေး သည့် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်မှ မဲဆန္ဒ နယ်မြေတစ်ခုသို့ ဒေသတွင်း ကျန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ နယ်မြေကွင်းဆင်းပြီး လူထုနှင့် တွေ့ဆုံပေးကြရန် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက စာထုတ်၍ မေတ္တာရပ်ခံသည်။
ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသော ဦးပညာဝံသနှင့် မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကို ဖမ်းမိ
ရန်ကုန်မြို့၌ လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်က အစိုးရ နုတ်ထွက်ပေးရေး သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒပြမှုကြောင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရသူ ဆရာတော် ဦးပညာဝံသကို ယမန်နေ့ (ဇွန်လ ၁၀ ရက်)တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်း ဆီးခဲ့သည်။
ကချင်စစ်ဘေး (၈)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲ စီစဉ်သူနှစ်ဦးကို ငြိမ်းစုစီပုဒ်မဖြင့် တရားစွဲ
ကချင်ဒေသ တစ်ကျော့ ပြန်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှု (၈)နှစ်ပြည့်နေ့ တွင် စစ်ရှောင်များကိုယ်တိုင် ပါဝင်သည့် ကချင်စစ်ဘေး(၈)နှစ် ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပြဇာတ်တင် ဆက်ပြသခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခြင်း မရှိဟုဆိုကာ ကချင်လူငယ်အဖွဲ့ တာဝန်ခံနှစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ပုဏ္ဏားကျွန်းရှိ စစ်ရှောင်စခန်းကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးရန် ကြိုးပမ်းမှု သံဃာတော်များတားမြစ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏား ကျွန်းမြို့နယ်၊ ပေါက်တောပြင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ စစ်ရှောင်စ ခန်းကို တပ်မတော်သား ၅၀ ကျော်အပါအ၀င် လုံခြုံရေးတပ် ဖွဲ့ဝင်များက ၀င်ရောက်စစ်ဆေး ရန် ဆောင်ရွက်မှုကို တားမြစ် ထားကြောင်းနှင့် အရပ်ဝတ်ဖြင့် စစ်ဆေးပါကအချိန်မရွေး စစ် ဆေးနိုင်ကြောင်း ပေါက်တော ပြင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ သံ ဃာတော်များက မိန့်ကြားသည်။
အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုကြုံတွေ့သော အမျိုးသမီးများ စိတ်ရောဂါဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များ
နေအိမ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုခံစားရသောအမျိုးသမီးများသည် စိတ်ရောဂါစိန်ခေါ်မှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေသုံးဆပိုများသည်ဟု လေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်ကဖော်ပြသည်။ ထိုကဲ့သို့ နှိပ်စက်ခံရသောအမျိုးသမီးများသည် စိတ်ကျစိတ် ကြွရောဂါနှင့် စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါခံစားရနိုင်ပြီး ရာဇ၀င်ရှိရန် လည်းသုံးဆပိုများသည်ဟု ဗြိတိန်စိတ်ပညာဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ သော သုတေသနကပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တည် ငြိမ်အေးချမ်းရေးအထောက်အ ကူပြုကော်မတီသည် ယခုလတတိယပတ်တွင် မြေပြင်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှု ထပ်မံပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကော်မတီဝင် ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောသည်။ အထက်ပါ ကော်မတီညှိ နှိုင်းအစည်းအဝေးကို နေပြည် တော်၌ တတိယအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ ပြီး ယခုတစ်ပတ်တွင် ရန်ကုန်၌ ပညာရှင်များ၊အတွေ့အကြုံရှိသူ များ၏ အကြံပြုချက်များလက်ခံ ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန် ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်တိုင်း ရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး တာဝန် ယူထားသူ ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောသည်။
ဘဲပျောက်ဆုံးသည့်ကိစ္စ မကျေနပ်ရာမှ ဓားဖြင့်ထိုးခံရ၍ လူတစ်ဦး သေဆုံး
ထန်းတပင်မြို့နယ် တွင်ဘဲပျောက်သည့်ကိစ္စ မကျေ နပ်ရာမှ ဘဲပိုင်ရှင်က ဓားဖြင့်ထိုး ၍ လူတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ထန်းတပင်မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအ ရာရှိတစ်ဦးကပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့တွင် ငလျင်လှုပ်
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့တွင် ဇွန်လ ၁၀ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီခန့်က ရစ်ခ်ျတာ စကေး ၄ ဒသမ ၂ အဆင့် ငလျင် လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် မြေလွှာလှုပ် ခတ်မှု သိသိသာသာ ကြုံတွေ့ခဲ့ သော်လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိ ကြောင်း ဒေသခံများက ပြော ကြားသည်။
စာမေးပွဲကျရှုံးသော ချစ်တပည့်သို့ ပေးစာ
ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း၏ အမှုစစ်ရဲအရာရှိနှစ်ဦးကို တရားခွင်၌ စစ်ဆေး
လက်နက်၊ မူးယစ် ဆေး၊ ဆက်သွယ်ရေးစက်များ သိမ်းဆည်းရမိသဖြင့် အမှုပေါင်း များစွာဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရ သည့် ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း၏ နေ ပြည်တော်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အ မှုသုံးခုအတွက် အမှုစစ်ရဲအရာရှိ နှစ်ဦးကို ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးက ယမန်နေ့တွင် စစ်ဆေးသည်။
အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်နှင့် မြန်မာကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း
အိန္ဒိယအစိုးရသည် စွမ်း အင်အမျိုးမျိုးထုတ်ယူသုံးစွဲရာ တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှယ်ယာ ကို ၂၀၃၀ မတိုင်မီ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း သို့ တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် သဘာဝဓာတ် ငွေ့အခြေခံစီးပွားရေးအကောင် အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိ နေသည်။
မင်းသားကြီးအာနိုးရဲ့သမီးနဲ့ ဟောလိဝုဒ်ကြယ်ပွင့် ခရစ္စပရတ် လက်ထပ်
နာမည်ကျော်မင်း သားကြီး အာနိုးရှဝါဇီနီဂါနှင့် မာ ရီယာရှရီဗာ၏ သမီးကက်သရင်း ရှဝါဇီနီဂါသည် ဟောလိဝုဒ်ကြယ် ပွင့်ခရစ္စပရတ်နှင့် လက်ထပ်လိုက် ပြီဖြစ်သည်။
တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်ထုတ်မယ့် EXO အဖွဲ့ဝင်ဘေဟွန်း
အမျိုးသားကေပေါ့ပ် EXO အဖွဲ့ဝင် ဘေဟွန်းသည် ဇူလိုင်တွင် တစ်ကိုယ်တော် အယ်လ်ဘမ် ထွက်ရှိမည်ဖြစ် သည်။ ယင်းမှာ လွန်ခဲ့သော ခုနစ် နှစ်က EXO နှင့်အတူ အနုပညာ ပွဲထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ဘေဟွန်း ၏ ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော် အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သည်။
Asia Special Award ဆု ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ် မြို့၌ ပြုလုပ်သည့် 2019 Asia Model Festival တွင် ဝတ်မှုံရွှေ ရည်ကို Asia Special Award ဆု ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဇာတ်ဝင်ခန်းလိုအပ်ချက် အရသော်လည်းကောင်း၊ ကျန်း မာရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး Gym ကစား၍ ထိန်းသိမ်းနေသလို အစားအသောက်ကိုလည်း Diet Plan နှင့် စားဖြစ်နေကြောင်း သရုပ်ဆောင်နေတိုးက ပြောသည်။
တရားမဝင်သစ်တင်ယာဉ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးစဉ် တရားခံမမိ၍ ဝေဖန်ခံနေရ
တရားမဝင်သစ်တင် ယာဉ် မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှု ထောက်ကြန့် မြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ယမန် နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသုံးစရိတ် မြင့်မားနေ၍ ယူရိုသန်း ၃၀၀ တန်ဖိုးအထိ ကစားသမားများ ရောင်းရမည်
ချယ်လ်ဆီးမှ ဘယ်လ် ဂျီယံတိုက်စ်စမှူး ဟာဇက်ကို ယူ ရိုသန်း ၁၅၀ ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းအ ပါအဝင် ကစားသမားအသစ်များ အတွက် ရီးရဲလ်၏ငွေသုံးစွဲမှု မြင့် မားနေသဖြင့် ယူအီးအက်ဖ်အေ ၏ ဘဏ္ဍာငွေမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင် ရေး စည်းကမ်းနှင့် ကိုက်ညီစေ ရေး ရီးရဲလ်အနေဖြင့် ယူရိုသန်း ၃၀
နေးရှင်းလိဂ်ဖလားကို ပေါ်တူဂီဆွတ်ခူး၊ အင်္ဂလန်အသင်းတတိယရ
ပထမဆုံးကျင်းပသော နေးရှင်းလိဂ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် အိမ်ရှင်ပေါ်တူဂီက နယ်သာလန် ကို ၁-၀ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရပြီးသုံးနှစ် အတွင်း ဒုတိယမြောက်ဆုဖလား ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေး အီရန်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်သွားမည်
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးသည် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း အီရန်နိုင်ငံသို့ ရှားရှားပါးပါး အလည်အပတ်သွားရောက် မည်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်၏ အဓိကမဟာမိတ် အမေရိကန်နှင့် အီရန်ကြား တင်းမာမှုများ ဖြေလျှော့ပေးရန် မျှော်လင့်နေသည်။
သေနတ်ကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦးကြောင့် လိင်တူစုံမက်သူချီတက်ပွဲ ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်
အမေရိကန်နိုင်ငံ လိင်တူစုံမက်သူချီတက်ပွဲတွင် ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်စေပြီး လူခုနစ်ဦး ဆေးရုံတက် ကုသခဲ့ရပြီးနောက် အမျိုးသားတစ်ဦး တရားစွဲခံရ သည်။
ဂျီ-၂၀ အစည်းအဝေးတွင် စီကျင်းပင်နှင့် ဒေါ်နယ်ထရန့် တွေ့ဆုံရေး တရုတ်အစိုးရ နှုတ်ဆိတ်နေ
ဂျီ-၂၀ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် တရုတ်သမ္မတ စီကျင်းပင်နှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ တွေ့ဆုံနိုင်ခြေ နှင့်ပတ်သက်၍ ကြေညာခြင်းမရှိ သေးသော်လည်း အမေရိကန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများအတွက် လမ်းဖွင့်ထား ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးဌာနက ပြောသည်။
စစ်ရေးတည်ငြိမ်မှု တိုးတက်သော်လည်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု တိုးတက်မှုမရှိဟု KIA ပြော
တပ်မတော်နှင့် ကချင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(KIA) အ ကြား တစ်ကျော့ပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရှစ်နှစ်ကာလအတွင်း လက်ရှိအခြေအနေသည် စစ်ရေး ပိုင်း၌ တိုးတက်မှုရှိသော်လည်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွင် တိုးတက် မှုမရှိသေးကြောင်း KIA ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူက ပြောကြားသည်။
ထိုင်းတွင် ပြုလုပ်မည့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ အစည်းအဝေး တားမြစ်သူသည် မြန်မာစစ်သံမှူးဟု တပ်မတော်အတည်ပြု
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး (NCA) လက်မှတ်ထိုးပြီးဖြစ်သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့၏ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်အ စည်းအဝေးကို တပ်မတော်၏ သီး ခြားညွှန်ကြားချက်ဖြင့် တားဆီး ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန် မာစစ်သံမှူးက သုံးသပ်ဆောင် ရွက်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း တပ်မ တော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအ ဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းရှိ SME လုပ်ငန်းများ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ISO လက်မှတ်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်မည်
မန္တလေးတိုင်းရှိ စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ISO လက်မှတ် ရရှိရေး လိုအပ်သည့် သင်တန်းများနှင့် လမ်းညွှန်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု မန္တလေးတိုင်းကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဥက္ကာ ကျော်ကပြောသည်။
စီးပွားရေး စင်္ကြံလမ်း အောင်မြင် အထ မြောက်ဖို့ ဆိုရင် ပြည်သူချင်း ချိတ်ဆက်တာ အားကောင်းဖို့ လိုတာမို့ ဒေသခံပြည်သူတွေ မထောက်ခံရင်၊ မယုံကြည်ရင် အဲဒီလမ်းတွေ၊ ခါးပတ်တွေဟာ အလုပ်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူချင်းချိတ်ဆက်တာကို ဗဟိုပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် ပြည်သူကို ရှင်းလင်းအသိပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးသလိုပြည်သူ့အသံကို နားစွင့်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ကလည်း သော့ချက်ကျပါတယ်။ ပြည်သူကိုအလေးမထား ဘေးဖယ်ထားမယ် ဆိုရင်တော့ ပြည်သူချင်းချိတ် ဆက်မှုဆိုတာ စကားလုံးသက် သက်သာ ဖြစ်နိုင်ကာ စင်္ကြံလမ်း တွေ၊ ခါးပတ်တွေကို ဖော်ဆောင် တဲ့နေရာမှာ စိန်ခေါ်ချက်တွေ၊ အကျပ်အတည်းတွေကို ပိုလို့တိုး တိုးလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် မကွေးမြို့နယ် ပန်းချီအစည်းအရုံး၏ ပန်းချီပြပွဲ ပြုလုပ်မည်
မကွေးမြို့နယ် ပန်းချီ အစည်းအရုံး၏ ပထမအကြိမ် ပန်းချီပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ပန်းချီ၊ ပန်းပု အစည်းအရုံးပြပွဲခန်းမတွင် ဇွန်လ ၁၉ ရက်ကစ၍ ငါးရက်ကြာ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ရေဦးမြို့နယ်တွင် မီးကြွင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ရေဦးမြို့နယ်တွင် မီးကြွင်း မီးကျန်မှတစ်ဆင့် မီးလောင်မှုဖြစ် ပွားရာ နေအိမ်နှစ်လုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ ကြောင်း ရွှေဘိုခရိုင်မီးသတ်ဦးစီး မှူး ဦးအေးမြင့်က ပြောသည်။
ရွှေဘိုခရိုင်၌ ပိုးကျနေသော ပြောင်းခင်းများကို ဆေးဖျန်းလုပ်ငန်း စတင်
ရွှေဘိုခရိုင် ရေဦးမြို့နယ် နှင့် ခင်ဦးမြို့နယ်တွင် ငမြှောင် တောင်ပိုး (FAW/1) ကျရောက် သော အစေ့ထုတ်ပြောင်းစိုက်ခင်း များ ပျက်စီးမှု မရှိစေရန် ပိုးသတ် ဆေးဖျန်းလုပ်ငန်း စတင်ဆောင် ရွက်နေကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ဒုတိုင်းဦးစီးမှူး ဦးအောင်မျိုးဦးက ပြောသည်။